箴言 14 CCB – Mmɛbusɛm 14 ASCB | Biblica
箴言 14 CCB – Mmɛbusɛm 14 ASCB
1Ɔbaa nyansafoɔ si ne dan,
nanso ɔbaa kwasea de nʼankasa ne nsa dwiri ne deɛ gu fam.
2Deɛ ne nanteɛ tene no suro Awurade,
na deɛ nʼakwan kyea no bu no animtiaa.
3Ɔkwasea kasa ma wɔbɔ nʼakyi abaa,
nanso anyansafoɔ ano bɔ wɔn ho ban.
4Baabi a anantwie nni no, adididaka no mu da mpan,
na ɔnantwie ahoɔden mu na nnɔbaeɛ pii firi ba.
5Ɔdanseni nokwafoɔ rennaadaa,
ɔdansekurumni hwie atorɔ gu hɔ.
6Ɔfɛdifoɔ hwehwɛ nyansa nanso ɔnnya,
nanso wɔn a wɔwɔ nhunumu nya nimdeɛ ntɛm.
7Twe wo ho firi ɔkwasea ho,
ɛfiri sɛ, worennya nimdeɛ mfiri nʼano.
8Anitefoɔ nyansa ne sɛ wɔbɛdwene wɔn akwan ho,
na nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ nnaadaa.
9Nkwaseafoɔ de bɔne ho adwensakyera di fɛ,
na wɔn a wɔtene mu na anisɔ wɔ.
10Akoma biara nim ɔyea ɛwɔ ne mu,
na obi foforɔ rentumi ne no nkyɛ nʼanigyeɛ.
11Wɔbɛsɛe mumuyɛfoɔ efie,
nanso teefoɔ ntomadan bɛyɛ frɔmm.
12Ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔ onipa ani so,
nanso ɛkɔwie owuo mu.
13Ɔsereɛ mu mpo, akoma tumi di yea,
na anigyeɛ tumi wie awerɛhoɔ.
14Akyirisanfoɔ bɛnya akatua sɛdeɛ wɔn akwan teɛ,
na onipa pa nso bɛnya ne deɛ.
15Atetekwaa gye biribiara di,
nanso ɔnitefoɔ dwene nʼanammɔntuo ho.
16Onyansafoɔ suro Awurade na ɔdwane bɔne,
nanso ɔkwasea yɛ asowuiɛ ne basabasa.
17Onipa a ne bo nkyɛre fuo no yɛ nkwaseadeɛ,
na deɛ ɔpam apammɔne no, wɔtane no.
18Ntetekwaafoɔ agyapadeɛ ne gyimie,
na wɔde nimdeɛ bɔ anitefoɔ abotire.
19Nnipa bɔnefoɔ bɛkoto nnipa pa anim,
na amumuyɛfoɔ akoto ateneneefoɔ apono ano.
20Ahiafoɔ deɛ, wɔn ayɔnkofoɔ mpo mpɛ wɔn anim ahwɛ,
nanso adefoɔ wɔ nnamfonom bebree.
21Deɛ ɔbu ne yɔnko animtiaa yɛ bɔne,
na nhyira nka deɛ ne yam yɛ ma onnibie.
22Wɔn a wɔbɔ pɔ bɔne nyera ɛkwan anaa?
Nanso wɔn a wɔhyehyɛ deɛ ɛyɛ no nya adɔeɛ ne nokorɛ.
23Adwumadenyɛ nyinaa de mfasoɔ ba,
na kasa hunu deɛ, ɛkɔ ohia mu.
24Anyansafoɔ ahonya ne wɔn abotire,
na nkwaseafoɔ agyimisɛm so gyimie aba.
25Ɔdanseni nokwafoɔ gye nkwa,
nanso ɔdansekurumni yɛ ɔdaadaafoɔ.
26Deɛ ɔsuro Awurade no wɔ banbɔ a emu yɛ den,
na ɛbɛyɛ dwanekɔbea ama ne mma.
27Awurade suro yɛ nkwa asutire,
ɛyi onipa firi owuo afidie mu.
28Ɔman mu nnipa dodoɔ yɛ ɔhene animuonyam,
nanso sɛ asomfoɔ nni hɔ a mmapɔmma no sɛe.
29Onipa a ɔwɔ abodwokyerɛ wɔ nteaseɛ a emu dɔ,
na deɛ ne bo fu ntɛm no da agyimisɛm adi.
30Akoma mu asomdwoeɛ ma onipadua nkwa,
na anibereɛ ma nnompe porɔ.
31Deɛ ɔhyɛ ahiafoɔ soɔ no bu wɔn Yɛfoɔ animtiaa,
nanso deɛ ɔhunu ohiani mmɔbɔ no hyɛ Onyankopɔn animuonyam.
32Sɛ amanehunu ba a amumuyɛfoɔ hwe ase,
nanso owuo mu mpo teneneefoɔ wɔ dwanekɔbea.
33Nyansa te nteaseɛ akoma mu,
na nkwaseafoɔ mu mpo, ɔyi ne ho adi.
34Tenenee pagya ɔman
na bɔne yɛ animguaseɛ ma nnipa biara.
35Ɔhene ani sɔ ɔsomfoɔ nyansani,
na ɔsomfoɔ nimguaseni hyɛ no abufuo.
ASCB : Mmɛbusɛm 14